Si aad u noqoto qof daacad ah in Lugood waa mid ka mid ah qalabka ugu fiican in aad music aad iPhone ama u maamuli lahayd heeso. Si kastaba ha ahaatee, ay dhaawac 'ciribta waa in aad u baahan tahay si xubnuhu your computer aad iPhone, taas oo macnaheedu yahay in aad leedahay si aad u hagaagsan aad iPhone la computer ka aadeen. Haddii kale, waxaad waayi doonaa heeso aad iPhone. Waa maxay nixi ah! Ma jiraa hab kasta oo ay ku darto heesahaaga iPhone aan Lugood? Sida xaqiiqada ah, waxaa jira. Fiiri siyaabaha hoos ku qoran si ay u gudbiyaan music inay iPhone aan Lugood.
Xalka 1. Ku dar Songs si iPhone aan Lugood, laakiin Wondershare TunesGo
Xalka 2. qalab kale desktop in laguu ogolaado in aad si ay u gudbiyaan music inay iPhone aan Lugood
Xalka 3. Available Cloud Services nidaameed Music si aad iPhone aan Lugood
Ku dar heesahaaga iPhone aan Lugood syncing on Mac ama PC;
Bedelka wax song in iPhone wax ku kombiyuutar kasta wihtout Lugood,
Copy songs qaabab kala duwan si ay u iPhone aan arrimaha incompatibility;
Playlists Import in Lugood Library si iPhone aan Lugood syncing;
Bedelka iPhone Songs si Mac aan Lugood
Bedelka iPhone Songs in PC aan Lugood
Tallaabada 1. Ku rakib Wondershare TunesGo (Mac) on your Mac
Click Download si aad u hesho xirmo rakibidda Wondershare TunesGo (Mac) ah. Waxay kaa caawin doonaan inaad ku wareejiso music inay iPhone aan Lugood aad Mac. Ka dib waxa ay ku rakibidda, waxaa isla markiiba ay maamulaan. Connect aad iPhone aad Mac via aad cable USB iPhone. Ka dib markaas aad ka arki kartaa iPhone muuqan suuqa kala ah Wondershare TunesGo (Mac).
Tallaabada 2. Songs ka Mac si iPhone aan Lugood
Haddii TunesGo ah (Mac) ogaadaa aad iPhone si guul ah, waa inuu ku shubaa doonaa iPhone uu furmo suuqa ugu weyn. Laga soo bilaabo uu furmo suuqa ugu weyn, guji Music . Ka dibna riix dar si aad u hesho heeso aad Mac. Dooro heeso iyo guji Ok inay saaray aad iPhone. Haddii hees ma aha qaab iPhone taageeray, popup ah ayaa kuu sheegi doono oo aad weydiisan kartaa inaad samaysaan qaab beddelidda. Wakhtigan, waa in aad guji badalo . Ka dib qaab beddelidda, waa in la soo guuriyeen doonaa iPhone si guul leh.
Tallaabada 1. Ku rakib qalab kaa caawinaya in aad Bedelka Music inay iPhone aan Lugood ee PC
Ku rakib TunesGo Wondershare on your computer iyo waxa maamula. Connect aad iPhone aad PC iyada oo USB ah cable iPhone. Marka si guul ah ku xiran, aad iPhone muuqan doonaan suuqa kala muhiimsan ee Wondershare TunesGo.
Tallaabada 2. Nuqul Music inay iPhone aan Lugood
Riix Media galeeysid bidix. Ka dib markii lagu magcaabo ah, by default, waxaad ka arki kartaa Music suuqa kala maamulka. Riix saddexagalka hoos Add ka dibna dooro mid ka mid dar File ama dar Folder . Waxay ku xidhan tahay in aad on. Haddii aad u baahan tahay inaad ka soo uruuriyaa oo music aad si aad iPhone wareejiyo songs selectd, weeyna ahayd inaad guji Add File . Haddii heesaha oo aad ku socoto inuu xidho iPhone waxaa lagu soo ururiyey in gal ah, waa in aad guji Add Folder . Ka dib markaas, waa in aad si aad iPhone dhirtuba aad heeso computer iyo dejinta.
MediaMonkey waxaa inta badan loo isticmaalaa sida ciyaaryahan warbaahinta u Windows. Si kastaba ha ahaatee, waa in ka badan sameeya. Oo weliba waxaa kuu maamuli lahayd music, videos, podcasts iyo files audio kale, waxa kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan music aad iPhone aan la isticmaalayo Lugood. Riix Tools> Device nidaameed, ka dibna waxaad ka dhigi kartaa heeso aad iPhone.
Baro wax badan oo ku saabsan MediaMonkey >>
Tababare CopyTrans (Windows)
Tababare CopyTrans la sheegay in uu badal ah Lugood si ay u maareeyaan iPhoneon. Runtii waa in ku daray songs on iPhone. Sidaas waxa laga yaabaa in qalab fiican si aad u dhigay heesahaaga iPhone aan Lugood. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu loogu talagalay oo kaliya in ay u hagaagsan heesahaaga iPhone. Ma jiro feature dheeraad ah waxaa loogu talagalay. Waxaa intaa dheer, waxa aanu u muuqan sida qalab standalone ah, laakiin muuqan qalab kale ka dib markii aad u soo dajiyo. Si aad u isticmaasho, ay magaca riix on interface si ay u abuurtaan. Hadda waxa kaliya ee u shaqeeya PC Windows.
Fiiri CopyTrans Manager >>
SynciOS waa qalab kala iibsiga kale oo wanaagsan oo aad isticmaali karto si ay u gudbiyaan music in iphone aan Lugood. Waxa ay u ogolaataa music soo degida ka your computer si aad iPhone si fudud. Sida Wondershare TunesGo, ay taageerto files audio qaabab kala duwan. Haddii aad qorshaynaysid in aad wareejiso music aad iPhone aan Lugood, waxa laga yaabaa in wax khiyaar ah oo wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, ma bixiyaan qaababka badan intii TunesGo Wondershare bixisaa. Oo haddii aad rabto in aad isku daydo sifooyinka la dheereeyey, waa inaad bixisaa $39.95 u version Pro. Waxa kaliya ee uu leeyahay version ee kombiyuutarada Windows.
View faahfaahin dheeraad ah u SynciOS >>
Free inay geliyaan 20000 songs,
heeso More $ 10 bil kasta;
Google Play Music ma aha oo kaliya meel si ay u iibsadaan muusikada laakiin laguu ogolaado in aad la isugu daro si 20000 heeso ka your computer si daruurtii lacag la'aan ka dib markii aad u saxiixdo xisaabta caadiga ah. Waxaad ku rakiban kartaa Music Player on your computer inay geliyaan aad heeso hore. Markaas macmiilka Google Music rakibi, eeg on your iPhone inuu u ciyaaro music aad uploaded in aad xisaabta ku daruur.
Free inay geliyaan 250 songs,
$24.99 halkii sanno Upload 250000 songs maximumly;
Amazon Cloud Player aad u saamaxaaya in ay geliyaan 250 heeso ka your computer si daruurtii lacag la'aan. Haddii aad rabto in aad geliyaan heeso badan ka ururinta, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso $24.99 / sanadkii ilaa 250000 heeso. Waxaad isticmaali kartaa desktop Cloud Player inay geliyaan aad heesahaaga daruurtii. Markaas rakibi Amazon Cloud Player u iPhone si ay u arkaan iyo ciyaaro, kuwaas oo heeso aad waxaad kor saartaa iPhone.
WordPress hawlaha sida weel meesha aad ku qori kartaa faylasha oo dhan in. Laakiin waxaa u shaqeeya wax badan oo fiican. Waxaa dhigeysa walax meel kasta oo aad u baahan tahay. Ka dib markii ay ku rakibidda WordPress on desktop, aad jiidi karaan jeedi songs, waxa uu. Markaas rakibi WordPress on your iPhone oo u hagaagsan, waxaad ka heli doontaa in aad heeso tahay waxaa aad iPhone. Simple, sax?
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPhone si Mac
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Computer si ay iPhone
Sida loo Copy Music ka iPhone in Lugood
Top Siyaabaha Photos iPhone kaabta in Mavericks
Tansee iPhone SMS Transfer Alternative
Sidee oo bilaash ah ilaa Space on iPhone
Sida loo SMS kaabta ka iPhone Ka hor inta jailbreaking macruufka 7
> Resource > Mac > Sidee si ay u gudbiyaan Music inay iPhone aan Lugood